सुकुम्बासीद्धारा भूमाफियालाई कुटपिट र गाडी तोडफोड, दाहालको २३ विगाह जग्गा ६ करोड - Nigranitimes
होमपेज / भिडियो / सुकुम्बासीद्धारा भूमाफियालाई कुटपिट र गाडी तोडफोड, दाहालको २३ विगाह जग्गा ६ करोड
सुकुम्बासीद्धारा भूमाफियालाई कुटपिट र गाडी तोडफोड, दाहालको २३ विगाह जग्गा ६ करोड
शुक्रबार, माघ २८, २०७८ , निगरानी टाइम्स
माघ २८ गते, कानेपोखरी । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका स्थित ६ नम्बरको दहिधापमा अर्काको जग्गा हेर्न आउने भूमाफियाहरुलाई स्थानीय सुकुम्बासीहरुले कुटपिट गरेका छन् ।
विहिबार ६ नम्बरको दहिधापमा काठ्माडौं निवासी हिरामणी दाहाल र हरिप्रसाद दाहालको नाममा रहेको जग्गा हेर्न आउने तीन जनालाई मरासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको हो । रामेछाप जिल्ला सुनपाती गाउँपालिका घर भई काठ्माडौ बस्दै आएका सेरबहादुर मगर, काठ्माडौ जोरपार्टी ७ बस्ने पर्लादमान सिंह बस्नेत र सोलुखुम्बु दुधकुन्जा नगरपलिका बस्ने नुतन श्रेष्ठलाई स्थानीयले पक्राउ गरी कुटपिट गरेको हो । आक्रोशित स्थानीयहरुले उनीहरु सवार बा ९ च ५७७३ नम्बरको कार पनि तोडफोड गरेका छन् ।
घटना स्थलमा तत्काल स्थायी प्रहरी चौकी रमाइलोका प्रहरी आएपछि थप क्षती हुनबाट बचेको थियो । भिड जम्मा हुदै गएपछि प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो भयो । इप्रका पथरी र सशस्त्र प्रहरी बल शनिश्चरेका बेश क्यामबाट थप सुरक्षा बल थप गरेपछि प्रहरीले साँझ तिर भिडबाट नियन्त्रण लिएका थिए । सुकुम्बासी तथा स्थानीयको घेराभित्रबाट ७ घण्टा पछि नियन्त्रणमा लिएका तीन जनालाई अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीमा राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेको डिएसपी कृष्ण खड्काले बताए । उनिहरु त्यहाँ आएर जग्गाको फोटो खिच्ने र भिडियो खिच्ने काम गर्दैगर्दा स्थानीयले देखेपछि पक्राउ गरी सोधपुच्छ गर्दै कुटपिट गरेका थिए ।
यहाँ यो घटना भने नौलो होइन, यस अघि २०७३ सालमा पनि यस्ता घटना भएको थियो । उतिखेर तीनजना मध्ये सेरबहादुर मगरले ठुलै ग्याङ ल्याएर नापजाँप गर्दा स्थानीय र उनिहर विच झडप भएको वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष खड्ग बस्नेतले बताए । तीन जना मध्ये सेरबहादुर मगर भूमाफियाको मुख्य नाइके रहेको छ । घटनामा ती मध्ये सोलुखुम्बु दुधकुन्जा नगरपलिका बस्ने नुतन श्रेष्ठ निर्दोष देखिन्छ । श्रेष्ठलाई कार चालक पर्लादमान सिंह बस्नेतले त्यस तर्फ ल्याएर आएको बताइएको छ । सेरबहादुर मगर र कार पर्लादमान सिंह बस्नेत पुरानो चिनजान भएको उनिहरुले बताएका छन् ।
नुतन श्रेष्ठ काठ्माण्डौं मल्टीप्रपोज कन्ट्रकसन कम्पनीका निर्देशक रहेको छ । पर्लादमान सिंह बस्नेत भने सोही कम्पनीको सिओको चालक रहेको छ । जुन क्षती भएको बा ९ च ५७७३ नम्बरको कार पनि सोही कम्पनीको सिओको कार रहेको कम्पनीको होल्ड टेक्नीकल डिर्पाटमेन्ट मनोज पौडेलले बताए । काठ्माण्डौं मल्टीप्रपोज कन्ट्रकसन कम्पनीले झापाको गौरीगञ्जमा एउटा फाक्टरीको कन्ट्रक्सन सम्बन्धी काम भईरहेकोले त्यस तर्फ काममा नुतन श्रेष्ठ आउने जाने गरेको श्रेष्ठले बताए ।
वडा नं. ६ दहिधाप माथी काठमाडौं निवासी हिरामणी दाहालको नाममा १२ विगाह र हरिप्रसाद दाहालको नाममा १३ विगाहको पुर्जा रहेको छ । उनिहरुको पुर्जाले वन क्षेत्र पनि भेटेको वडाध्यक्ष खड्ग बस्नेतले बताए । जुन क्षेत्रमा सुकुम्बासीको बस्ती रहेको छ । दाहाल परिवारले उतिखेर मालपोतको कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा पैसा खर्च गरी सो बराबरको जग्गाको पुर्जा आफ्नोमा बनाएको वडाध्यक्ष बस्नेत बताउँछन् । त्यस जग्गामा सेरबहादुर मगरको ७० लाख खर्च गरेको बताउँछ । यस अघि पनि ६ करोडमा जग्गा दिदैछन् भनेर धरानको गोपाल विष्ट, गछियाको भूपाल तामाङ र सुन्दरहरैचाको अशोक जिम्बा त्यस स्थानमा आएका थिए । ब्लाष्ट दैनिकबाट